Sahanka Reconnect West Seattle Survey
Ku saabsan sahankaan
Ogeysiinta Arimaha gaarka ah:
Warbixinta lagu bixiyay sahankaan waxaa loo tixgeliyay diiwaanka bulshada oo waxay quseyn kartaa siideynta bulshada. Wixii warbixin dheeraad ah, fiiri Xeerka Diiwaanada Bulshada, RCW Sadarka 42.56. Si wax badan looga barto sida aan u maareyno warbixintaada, fiiri Bayaankaankeena Arimaha gaarka ah.
Sahanka Reconnect West Seattle waxay ka ciyaareysaa door muhiim ah oo qaabeynta shaqada aan ku sameyno Qorshaha Tallaabada Dhaqaaqa Reconnect West Seattle, taas oo ujeedkeeda ah dhaqaajinta sida badan ee dadka galayo ama ka baxayo jasiirada sida suurtogalka ah iyada oo aan laga eegin leemanka safarka sida weyn u yaraaday, iyada oo la yareynayo saameynta baabuurta leexashada korodhay oo illaa xaafadaha sida Highland Park iyo South Park.
Si markaas loo joogteeyo dhaqaaqa adag oo agagaarka Duwamish, waxaan u baahannahay in qof walba ee ku nool West Seattle ee ku socdo, oo gudaha qaababkooda, tixgeli sida ay ugu safri karaan sii socodka iyo ka imaanshaha West Seattle gaari la'aan.
Tixgelintaada waa muhiim sababtoo ah xiritaanka Buundada High-Rise waxay abuurtay su’aal adag oo maareynta baabuurta oo aan lagu xalin karin wadooyinka leexashada. Bilowga 2020, waxaa jiray 21 leemanka safarka baabuurta oo gudbeyso Wabiga Duwamish, iyo xiriirada jasiirada West Seattle: Buundada Sare West Seattle (7 leeman), Buundada Hoose (2 leeman), buundada 1st Ave South (8 leeman) iyo Buundada South Park (4 leeman). Iyo xiritaanka Buundada High-Rise iyo xadeynada Buundada Hoose, waxaa hadeer jiro 12 leemanka safarka oo baabuurta shaqsiga ah oo diirada laga saaray dhammaadka koonfur.
Waxaan filaneynaa in caqabadaan ay ka sii dartod sida sharuudaha ka fogaanshaha bulshada ay dhammaadaan iyo dad badan shaqada ku soo laabtaan, dugsiga, iyo safarka joogtada ah.
Yoolka Reconnect West Seattle waa taageerida heerar la mid ah oo safarka dhinaca Duwamish illaa kuwa la arkay xiritaanka ka hro ee Buundada West Seattle High-Rise, iyada la yareynayo saameynada cadaala darada deegaanka ee bulshooyinka saaran wadooyinka leexashada ee Duwamish Valley.
Si loo gaaro midaan, waxaan dajineynaa diiradaha hamiga qaarkii oo nafsadeena – iyo taada – si aad u badeshid sida aad ku tagtid agagaarka mustaqbalka markii sharuudaha ka fogaanshaha bulshada la qaado.
Waaxda Gaadiidka Seattle (SDOT) waxay si dhow ula shaqeynayaan jaalalkeena ee Gobolka King, Washington State Ferries, Waaxda Gobolka Washington ee Gaadiidka, Ku meelgaarka Dhawaqa iyo Isbaheysiga Dakada Seattle/Northwest Seaport si ay u aqoonsadaan iqtiyaaro badan oo safarka ah si ay uga caawiso safrayaasha West Seattle.
Sahankaan waa fursadaada ugu horeyso oo u ogolaaneyso SDOT iyo jaalalkeena inay ogaadaan waxa aad ubaahantahay inay kaa caawiso agagaar ku tagida Buundada West Seattle way xirantahay iyo si loo gaaro yoolkeena la wadaagay ee Reconnect West Seattle. Sahankaan sidoo kale waa fursadaada lagu aqoonsanayo oo lagu mudnaan siinayo mashaariicda loo baahanyahay oo shabakada baskiilka.